Daadad ka dhacay daarta weyn ee Yopougon CHU: Tirada dadka ku rogmatay (+ fiidiyow)
ACCUEIL » COMPANY Daadad ka dhacay daarta weyn ee Isbitaalka Jaamacadda Yopougon: Dadweynaha ayaa xanaaqsan (+ video)
Isbitaalka Jaamacadda Yopougon waa mid ka mid ah aasaaska qeyb ka ah nidaamka dayactirka xarumaha cusbitaalka sida uu sheegayo barnaamijka dowladda Ivory Coast. Wadarta 50 bilyan ee CFA Francs xitaa waa la cadeeyay si loo dhammeeyo shaqada dhismahan, taas oo markaa si aad ah u burburay.
Ka dib daadadku wuxuu ka dhacay daarta weyn ee Xarunta oo ahayd habeenka Axadda 18 illaa Isniinta 19 Agoosto 2019, dadku ma joojinayaan qaylada ay ka muuqato.
Tani, marka la eego shaqada dayactirka ee loo qabtay waxtarka garoonka, ayaa ku kacaya tiro badan oo balaayiin ah.
Sidoo kale akhri: Wareysiga Barthélémy Inabo Zouzoua / Waxay ku soo laabatay RTI, "Variétoscope" ... Barthélémy Inabo ayaa wareysatay ...
Murugo iyo xanaaq, sidaa darteed, muwaadiniintu waxay aaminsan yihiin in gobolku uu wax ka qabanayo su'aasha caafimaadka ee Cote d'Ivoire; qaar kale waxay ku andacoonayaan in xalka si dhaqso leh loo helo si looga fogaado dhibaatooyinka noocaas ah mustaqbalka.
Sidoo kale akhri: Maroodiyaasha: El Hadj Danté, Nicolas Tié, Tapé Ira ... dhaxalka suurtagalka ah ee Gbohouo Sylvain
Xusuusin ahaan, daadadku waxay ka dhalan doonaan go'itaanka tuubbo biyo oo awood sare leh qolka farsamada, oo ku taal meel ka sareysa masraxa qalliinka weyn ee Isbitaalka Jaamacadda Yopougon, sida ay sheegtay Wasaaradda. ee Caafimaadka iyo Nadaafadda Dadweynaha ee bayaanka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/societe/faits-divers/inondation-au-grand-bloc-du-chu-de-yopougon-la-population-en-rogne-video
Sacuudi Carabiya: Maxaa furitaanka dukaamadu is beddelayaan saacadaha salaadda - JeuneAfrique.com